DFS oo sheegtay in howlgal lagu dilay Xubno ka tirsan Al-Shabaab – Idil News
Ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Kumaandooska Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee DANAB gaar ahaan Ururka 7aad ee, ayaa howlgallo qorsheysan oo ka dhan ah Ururka Al-Shabaab waxaa ay ka sameeyeen degaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe.
Ciidamada ayaa howlgalka waxaa ay sigaar ah uga fuliyeen Tuulooyinka Mareerey, Sabuun, Baaroow Madiina cade , Gaaleef iyo Buurdheer, waxaana saraakiisha hoggaamineysay ay sheegeen in howlgalka qasaaro lagu gaarsiiyay Al-Shabaab.
Ku-simaha Taliyaha Guutada 16-aad Kumaandooska Danab Dhamme Xasan Maxamed Cismaan (Xasan Tuure) oo lahadlay Idaacadda Ciidamadda Qalabka Sida ayaa sheegay in howlgalka lagu dilay 9-katirsan Al-Shabaab tiro kalana ku dhaawaceen.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in howlgalka lagu burburiyay Saldigyo ay Al-Shabaab kasoo abaabuli jireen weerarada ay ka fuliyaan degaannada Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Kumaandooska Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee DANAB ayaa inta badan waxaa ay howlgallada ka fuliyaan degaano ka tirsan labada Shabeelle iyo Jubbada Hoose, hayeeshee ay marraka qaar weerar kala kulmaan Al-Shabaab.